Hurumende Inopikisa Mutongo Wapihwa VaBennet
Kukadzi 24, 2009
Mutongi wedare repamusoro reHigh Court, VaTedias Karwi, vatambira chikumbiro chekuti mubati wehomwe muMDC, uye vari kutarisirwa kuva mutevedzeri wegurukota rezve kurima, VaRoy Bennett, vapihwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti nyaya dzavari kupomerwa, dzitongwe vachibva kumba kwavo.
Asi hurumende inonzi yabva yati iri kupikisa mutongo uyu. Izvi zvinoreva kuti VaBennet vacharamba vari mutorongo kudzamara mumwe mutongo wapihwa pakupikiswa kwaitwa mutongo weChipiri uyu.
Mutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, vanonzi vakurudzira dare kuti riburitse VaBennet muhusungwa mushure mekunge vabvisa mari yechibatiso. VaTsvangirai vati semukuru wemakurukota ehurumende, vachaona kuti VaBennet vatevedza mutongo wavanenge vapihwa. VaTsvangirai vapa chikumbiro ichi kudare kuitira kuti VaBennet vaburitswe muhusungwa sezvo vari kutarisirwa kugadzwa semutevedzeri wegurukota rezvekurima.
Muchuchisi wehurumende atiwo chikumbiro chaVaTsvangirai hachina kuitwa nenzira kwayo. Izvi zvapa VaKarwi kuti vatsiure muchuchisi wehurumende vachiti iye segweta rehurumende, aifanirwa kuudza VaTsvangirai zvinofanirwa kuitwa.
Dzimwe nyika dzinoti hadzisi kufarawo nenyaya yekugariswa mutirongo kwaVaBennet, kunyange hazvo VaTsvangirai nemutungamiri weSouth Africa, VaKgalema Motlanthe, vakaudza vatori venhau muCape Town svondo rapera kuti VaMugabe vainge vatenda kuti VaBennet nevamwe vasungwa, vaifanirwa kupihwa mukana wekubvisa mari yechibatiso.
Asi vachitaura nenhumwa dzeUnited Nations neMuvhuro, VaMugabe vakati vanhu ava vaizonzwirwa tsitsi kana matare apedza nyaya dzavari kupomerwa.
Mashoko aya atsinhirwa negurukota rezvemitemo, VaPatrick Chinamasa, avo vaudza Studio7 kuti kunyora tsamba kudare kwaitwa naVaTsvangirai, kuda kuvhiringidza kufamba kwematare.
Asi mutauriri weMDC, VaNelson Chamisa, vaudza Blessing Zulu weStudio7 kuti mabatirwo ari kuitwa nyaya yaVaBennet anogona kukanganisa hurumende yemubatanidzwa.